လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည် "မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြစွာရှိသည်" ဟူသောအဆိုကိုလေ့လာမှုများကမှားယွင်းစေသည်။
Porn စွဲသူများသည်လိင်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုရှိသူတစ် ဦး ဦး ၌စွဲလမ်းမှုမရှိသောကြောင့်သူတို့၌မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုရှိသည်ဟုပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ဒေးဗစ်လဲ့ (စာရေးသူ) လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအဓိကဝေဖန်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းရှင်းပြသည် (နောက်ဆုံးသတင်း: David Ley သည်ယခုအခါ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဆန်သော porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster မှလျော်ကြေးပေးနေသည်။)
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေ့လာပါ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်"။ အဆိုပါ blog post:5လအတွင်းသည်ထင်ရှား ရှေ့မှာ Prause ၏ EEG လေ့လာမှုကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်း၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောခေါင်းစဉ်သည်လှည့်စားနေသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ် neuroscience အဲဒီမှာပေးအပ်သည်။ အဲဒီအစား, ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့, မတ်လ 2013 blog post: ကန့်သတ်သူ့ဟာသူတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုမှ - သံမဏိ et al။ , 2013.
Ley နှင့်လေ့လာမှုကိုရေးသားသူနီကိုးလ် Prause နေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်, စတီး et al ။၊ ၂၀၁၃ တွင်လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုမှုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း (သို့သော်အပြာနှင့်အော့ဖ်လွန်းလုပ်လိုသည့်ဆန္ဒမဟုတ်) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate မယ်လို့ (ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (သံမဏိ et al အပါအဝင် 2018 မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ,5နှင့် Prause et al ဒီ 2013 တင်ဆက်မှုများတွင် 2015) ။ ။ : porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်)?
အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ coupled porn ပိုမို cue-reactivity ကို၎င်းနှင့်အတူ aligns 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှု porn စွဲပေါ်မှာ။ ၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များ သံမဏိ et al။ ၂၀၁၃ သည်ရေးသားထားသည့်ခေါင်းစီးများ၊ Prause အင်တာဗျူးများသို့မဟုတ် Ley ၏ဘလော့ဂ်တင်သည့်အခိုင်အမာများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ရှစ် နောက်ဆက်တွဲသက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများကဆိုသည် သံမဏိ et al။ တွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောပုံစံကိုထောက်ခံသည် (“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒ” အယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်သည်): ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု, စာနယ်ဇင်းနှင့်လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်အားနည်းချက်များကိုထွက်တင်ထောက်ခံထောက်ခံချက်ဖော်ထုတ်။
2015 ခုနှစ်, နီကိုးလ် Prause တစ်စက္ကန့် EEG လေ့လာမှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ (Prause et al။ , 2015), အရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများအတွက်နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူနည်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု () တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်သညျ့လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများကိုအပြိုင်ဟို-hum porn (၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအငြိမ်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ပျင်းခဲ့သည် Kuhn & Gallinat ။ , 2014) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်သည်းခံမှု၊ စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာနှင့်ကိုက်ညီသည်။
သည်းခံစိတ်ကိုလူတစ် ဦး ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့) လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်လာခြင်းအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းကိုးခုကဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု) တွင်အရှိန်လျှော့ / အလေ့အကျင့်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိသည်ဟုသဘောတူသည် ၏9သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ Prause et al။ , 2015။ Prause ၏ဒုတိယ EEG လေ့လာမှုမှရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်ပိုမိုနည်းပါးသည်။ တကယ်တော့, နီကိုးလ် Prause တွင်ဖော်ပြထားသည် ဒီ Quora post ကို သူမသည်မြင့်မားသောလိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူချက်အယူအဆကိုဖော်ပြခြင်းမရှိတော့ပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားမြင့်မားတဲ့ရှင်းပြချက်ကိုငါသဘောမကျပေမယ့်အခုငါတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ LPP လေ့လာမှုကကျွန်မကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လုပ်ဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။
Prause သည်လှန်လှောပတ်နေသည်နှင့်အမျှ Ley's နှင့်အခြားသူများသည်“ porn / sex စွဲ = မြင့်မားသော libido” ဆိုသည့်စကားကိုဆက်လက်ထောက်ခံမှုဘယ်မှာလဲ။
ဒီ ၁၂ မိနစ်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ် - "ကမြင့်မားသောလိင် drive ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် porn စွဲ Is?" နောဧကိုဘုရားကျောင်းအားဖြင့်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "မြင့်မားသောလိင်စိတ် = လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှု" ပြောဆိုချက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးမှားယွင်းစေသည့်လေ့လာမှုများစွာသည် -
1) "လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်အမျိုးသားများလိင်စိတ်စူးစမ်းမှု၏လက္ခဏာတစ်ခုလား။ အွန်လိုင်းလေ့လာမှုမှရလာဒ်များ။ ” (၂၀၁၅)) - သုတေသီများသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုမြင့်မားသောအမျိုးသားများနှင့်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ရှိသူတို့အကြားထပ်တူကျခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာရွက်မှကောက်နှုတ်ချက်
"ဒီလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်တစ် ဦး မှညွှန်ပြ အမျိုးသားများတွင်အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire နှင့် Hypersexuality ၏ကွဲပြား phenomenology ။"
2) "လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှု - ပြProbleနာရှိသောလိင်၏တည်ဆောက်ပုံကိုစူးစမ်းခြင်း” (၂၀၁၅) - လေ့လာမှုအရလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြားတွင်အနည်းငယ်ထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ စာရွက်မှကောက်နှုတ်ချက်
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုက hypersexuality နှင့်မြင့်မားသောလိင်အလိုဆန္ဒ / လှုပ်ရှားမှုများ၏ထူးခြားမှုကိုထောက်ခံသည်။ "
3) "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါ ၀ င်သူများအတွက်အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ” (၂၀၁၄) - ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအားကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် fMRI လေ့လာမှု။ လေ့လာမှုအရလိင်အကျင့်ယိုယွင်းသူများသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးပြီးစိုက်ထူမှုများရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲခဲ့သော်လည်း (Steele နှင့်ဆင်တူသည်) et al။ အထက်) ။ စက္ကူကနေကောက်နှုတ်ချက်:
"အရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းတွင် , C,SB ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မ အတွက် (စားပွဲတင် S3 S1 file) ။ "
CSB ဘာသာရပ်များကြောင်းအစီရင်ခံ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများ ... .. အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလျော့နည်းလာသည့်လိင်စိတ်နှင့်လိင်စိတ်ကိုထိခိုက်စေသည်။
4) “ အလွန်အကျွံလိင်စိတ်ရည်ညွှန်းခြင်းအမျိုးအစားအလိုက်လူနာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ - အပြီးသတ်အထီးအမှုပေါင်း ၁၁၅ ခု၏အရေအတွက်ဇယားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” (၂၀၁၅) - hypersexuality မမှန်နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာပါ။ 27 သူတို့ porn မှတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုထက်ပို7နာရီ masturbated အဓိပ္ပာယ် "ကိုရှောင်ကြဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ," အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
5) "ဥရောပနိုင်ငံနှစ်ခုမှစုံတွဲအမျိုးသားများအကြားတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ပျင်းခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ ” (၂၀၁၅) - ဒီစစ်တမ်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality ၏အစီအမံများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
"Hypersexuality သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ erectile function ကိုပိုမိုပြဿနာများ။ "
6) "မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015)" - ဤအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% (နှင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက် 0%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 6% ။ လေ့လာမှုမှ:
7) "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ ဦး နှောက်” (၂၀၁၄) - ကိုလောင် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူ correlating3သိသိသာသာစွဲလမ်း-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရသည့်တစ်ဦးကမက်စ် Planck လေ့လာမှု။ ဒါဟာအစကိုပိုမိုညစ်ညမ်း vanilla porn မှထိတွေ့မှု (.530 ဒုတိယ) ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်အတွက်လျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး 2014 ဆောင်းပါးခဲရေးသားသူအတွက် ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
8) "လူငယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတွင် etiological အချက်တစ်ခုအဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” (၂၀၁၄) - ဤစာတမ်းပါဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် (၄) ခုအနက်မှ (၁) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (လိင်စိတ်ပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသား) (လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ fetishes၊ anorgasmia) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှ ၆ ပတ်တာကိုရှောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈ လအကြာတွင်အမျိုးသားသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခြင်း၊
9) "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း - မည်သူအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲ၏ရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်” (၂၀၁၂) - "hypersexuals" နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတစ်ခုမပြုလုပ်သော်လည်း ၁) ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ရမှတ်နိမ့်ကျမှုနှင့်တသမတ်တည်းဆက်နွယ်နေကြောင်း၊ (၂) ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများနှင့်အသုံးပြုသူမဟုတ်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
10) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - ဤ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ ဒါကစွဲလမ်းမှု၏အမာခံများဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်း ၈ ခုသည်အမှန်တရားကိုရှင်းပြသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
11) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - တစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှုကနေ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
12) နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း - Porn အသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးအတွက်ယောက်ျားနဲ့အနုတ်လက္ခဏာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်တွင်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ porn ကိုအသုံးမပြုခဲ့သူစုံတွဲများအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုကနေအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
13) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015) - နှင့်အတူ related ခံခဲ့ရပါတယ် porn မှ Masturbating လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရငျးနှီးလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အမျိုးသားများအနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်။ တစ် ဦး က multivariate အကဲဖြတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငြီးငွေ့မှု၊ မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်စုံတွဲသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျော့နည်းသွားစေပြီးလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုလျော့နည်းစေသည်။ ”
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ကြသော [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးသော] အမျိုးသားများ [၂၀၁၁ တွင်]၊ 26.1% သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ။ ဖြည့်စွက်ကာ, ယောက်ျား၏ 26.7% ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလိင်ထိခိုက်ကြောင်းအစီရင်ခံ နှင့် 21.1% ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းကြမှအခိုင်အမာ။ "
14) ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015) - ကောက်နှုတ်ချက်:
စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်အပြုအမူတွေ, ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအသဘောထားတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျားအပေါ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုများယူသင့်ပါတယ်။ ရေရှည်ညစ်ညမ်း၌သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကိုဖန်တီးရန်ပုံရသည်။ porn ကြည့်နေစဉ် masturbating သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အများဆုံးသုံးစွဲတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကမကြာမီအနေနဲ့အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်အမြင်အာရုံဆွလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုံ rewiring ၌သူ၏ဦးနှောက်ပါဝင်နေသည်။
15) အမျိုးသားများအတွက် (2016) နှင့်အတူလိင်ဖူးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသားများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူယန္တရားများပုံစံလုပ်ရန် Hypersexuality နားလည်ခြင်း
နောက်ထပ်ကျနော်တို့ CSBI ထိန်းချုပ်ရေးစကေးနှင့် bis-BAS အကြားမျှအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်၏မရှိခြင်းထက်ပိုသောယေဘုယျအမူအကျင့်ကို Activation နှင့် inhibitory ယန္တရားများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် inhibitory ယန္တရားများတိကျတဲ့နှင့်မဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ ဤသည် Kafka နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်လိင်တစ်ဦးကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ် hypersexuality conceptualizing ကိုထောကျပံ့ဖို့ယ့်ပုံပဲ။ ထို့ပြင်ထိုသို့ hypersexuality မြင့်သောလိင် drive ကိုတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမြင့်ဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းပါဝငျကွောငျးအနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှမရှိစေရန်တားဆီးခြင်းလေးစားမှုနှင့်အတူပေါ်လာပါဘူး။
16) , Hypersexual လိင် compulsive, ဒါမှမဟုတ်ရုံ Highly လိင် Active ကို? ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျားနှင့် HIV-Related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် (2016) ၏သူတို့ရဲ့ Profiles သုံးခုထူးခြားသောအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေး - လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပါကလူ ဦး ရေတစ် ဦး ချင်းစီ၏အုပ်စုတစ်စုသာရှိသည်။ အထက်ပါလေ့လာချက်များအရဤလေ့လာမှုသည်ကွဲပြားသောအုပ်စုငယ်များစွာကိုအစီရင်ခံခဲ့သော်လည်းအုပ်စုအားလုံးသည်အလားတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သုတေသနထွန်းသစ်စလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (GBM) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (SC) နှင့် hypersexual ရောဂါ (HD) သုံး groups- ပါဝင်သောအဖြစ် conceptualized စေခြင်းငှါအယူအဆထောက်ခံပါသည်SC မဟုတ်သလို, HD ကိုလည်းမ; သာ SCနှင့် SC နှင့် HD ကိုနှစ်ဦးစလုံးအဆိုပါ SC / HD ကိုစဉ်ဆက်ဖြတ်ပြီးပြင်းထန်မှု၏ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်ဖမ်းယူတို့တွင်အရှင်သခင်။
ဤလိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောနမူနာ၏ထက်ဝက်နီးပါး (၄၈.၉%) သည်ခွဲခြားထားသည် SC မဟုတ်သလို, HD ကိုလည်းမအဖြစ် 30% သာလျှင် SCနှင့် 21.1% အဖြစ် SC နှင့် HD ကိုနှစ်ဦးစလုံး။ ကျွန်တော်အထီးမိတ်ဖက်, စအိုလိင်ဆက်ဆံလုပ်ရပ်များ, ဒါမှမဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံပြုမူသောအမှုအစီရင်ခံအရေအတွက်ကအပေါ်သုံးခုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့နေချိန်မှာ
17) ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - များစွာသောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျှတိုက်ပိတ် porn အသုံးပြုသူများကဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါအလုပ်သမား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES), လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်တစ်ဦး "ပိုဆိုးလိင်ဘဝ" နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "လိင်ဘဝက" မေးခွန်းတွေနဲ့ porn အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ် PCES "အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ" အကြားဆက်စပ်မှုဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
18) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - လက်ရှိဥက္ကiat္ဌဖြစ်သောပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကပြန်နှင့်ထွက်သည့်စိတ္တဇဆိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်သူကအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် porn-သွေးဆောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် anorgasmia) ။ အဆိုပါစက္ကူ 35 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူအမျိုးသားများနှင့်သူတို့ကိုကူညီအားမိမိကုထုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမိမိအလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုကိုဗဟိုပြု။ စာရေးသူကသူ့လူနာအများစုအများအပြား porn စွဲခံနေရအတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖော်ပြသည်။ ပြဿနာတွေ (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနာတာရှည် ED ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, ဒါကြောင့် ED တစ်အကြောင်းမရှိအဖြစ်ပေးထားသောဘယ်တော့မှကြောင်းသတိရ) ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့စိတ္တဇအချက်များ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
မိတ်ဆက်ခြင်း: ကျယ်ပြန့်ကျင့်သုံးသည်သူ၏ခါတိုင်းလိုပုံစံမီတာအတွက်အန္တရာယ်ပင်အထောက်အကူယင်း၏အလွန်အကျွံနှင့် Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြား form မှာ asturbation, ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲယနေ့ဆက်စပ်လွန်းမကြာခဏကသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်အတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်.
ရလဒ်များ: ကုသမှုပြီးနောက်, ဤလူနာတွေအတွက်ကနဦးရလဒ်များကို, "နားမလည်" သူတို့ masturbatory အလေ့အထများနှင့်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏မကြာခဏဆက်စပ်စွဲဖို့, အားတက်စရာများနှင့်အလားအလာရှိပါတယ်။ ၃၅ ယောက်ထဲက ၁၉ ယောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြမှုလျော့နည်းသွားတယ်။ ကမောက်ကမဖြစ်မှုက regressed ဖြစ်ပြီးဒီလူနာတွေကကျေနပ်လောက်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။
19) Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇) - အသစ်စက်စက်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချ။ ဗီဒီယိုက porn အလုပ်သမားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့လုလင် 50% နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး နှင့် porn (ပျှမ်းမျှအသက် 29 ခဲ့သည်) ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
20) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016) - တစ်ဦးဦးဆောင်သုတေသနပြုတက္ကသိုလ်ကနေဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှော့ erectile function ကိုနှင့်လျှော့ချခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်မတရားသောခံစားခဲ့ရသညျ။ အဆိုပါလေ့လာမှုက "လူတို့သညျရှုမွငျကွ porn ၏ 49% အဖြစ်တင်းမာမှုအစီရင်ခံရန်ပုံပေါ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "(ကိုကြည့်ပါ လေ့လာမှုတွေ ) porn အသုံးပြုမှု porn နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့လေ့ / desensitization သတင်းပို့ကောက်နုတ်ချက်:
မှတ်ချက် - ဒါက ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီဟုဆိုကာနှစ်ဦးကအခြားအလေ့လာမှုများအတူတကွ porn-သွေးဆောင် ED debunk တစ်ခုမအောင်မြင်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများ cobbled ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရ: စက္ကူ 1 အနေနဲ့စစ်မှန်လေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့, နှင့်ခဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှုံ့; စက္ကူ2အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ porn - သွေးဆောင် ED ကိုထောကျပံ့ပေး။ ထို့အပြင်စက္ကူ ၂ သည်“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု” သာဖြစ်သည် အရေးကြီးသောဒေတာသတင်းပို့ဘူး.
21) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) -“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်အင်တာဗျူးသူများကို“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
23) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသြစတြေးလျလူမျိုးတို့၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသူများ (n = ၈၅၆) ကို 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကသင့်ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သလဲ' ဟူသောအဖွင့်မေးခွန်းဖြင့်မေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဖွင့်မေးခွန်းတစ်ခုကို (ဎ = 718) မှတုန့်ပြန်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှု 88 ဖြေဆိုသူများက Self-ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, arousal နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်: ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုအထီးပါဝင်သူသုံးဒေသများရှိသက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြ။ တုံ့ပြန်ချက် (အမျိုးသား, ဘိုးဘွားရိပ်သာ 18-19) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ထင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူး" ပါဝင်သည်။
24) ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring - "အောင်းနေချိန်ကာလ" (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - လေ့လာလက်ရှိ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း) အကြားဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏ပျမ်းမျှအသက် 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူတစ်ပင်အားကောင်းဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
25) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်သူ၏အထီးလူနာအချို့ကိုအပေါ်ရှိခြင်းခဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိဖွစျလာသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကရေးသားလေးလက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဘက်စုံစက္ကူ, ။ အောက်ကကောက်နုတ်ချက်တစ် 31 တစ်နှစ်အစွန်းရောက် porn နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူကိုလူဟောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤသည်သည်းခံစိတ်, တင်းမာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်ဖို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောထွေးစိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာများအတွက်သရုပ်ခွဲ psychotherapy အတွက်တစ်ဦးက 31 နှစ်အရွယ်အထီးကြောင်းအစီရင်ခံ သူသညျမိမိလက်ရှိမိတ်ဖက်များကနှိုးဆွလိင်ဖြစ်လာအခက်အခဲကြုံနေရခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်အကြောင်းကိုအများကြီးဆွေးနွေးပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို, ဖြစ်နိုင်သမျှငုပ်လျှိုးနေပဋိပက္ခများကိုသို့မဟုတ် (ကသူ၏တိုင်ကြားချက်များအတွက်ကျေနပ်ရှင်းပြချက်ရောက်ရှိလာသောမပါဘဲ) ဖိနှိပ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာသူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာမယ့်အထူးသဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ပေါ်မှီခိုသောအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ အတန်ငယ်သတိထားသူကသူ့ဖန်စီဖမ်းမိနဲ့သူ့အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းအတော်ကြာယောက်ျားမိန်းမတို့ပတျသကျကိုတခုတခု "မြင်ကွင်းတစ်ခု" ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတော်ကြာအစည်းအဝေးများ၏သင်တန်းကျော်သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, မိမိနှစ်လယ်ပိုင်း 20s ကတည်းကရံဖန်ရံခါစေ့စပ်ခဲ့သောအတွက်လှုပ်ရှားမှုသည်သူ၏အသုံးပြုမှုကိုအပေါ်သို့တင်ပြသည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မိမိအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပြန်ခေါ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုးပွားလာမှီခို၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်ပါဝင်သည်။ သူလည်းသူကလိင်စိတ်နိုးထ၏ကြိုတင်, တပ်မက်လိုချင်သောအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်အတူအသစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖှေနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးမဆိုအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏နှိုးဆွသောသက်ရောက်မှုတစ်ခု "သည်းခံစိတ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ပြခဲ့သည်။
26) ငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) ကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု profile များကိုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ပါ - များ၏ရေးသားမှု-up, ဒီ 2019 လေ့လာမှု လိုချင်သောအရာတွေအများကြီးထွက်ခွာမည်။ စာတမ်းအပြည့်အစုံမှဤနံပါတ် (၄) တွင်များစွာဖော်ပြထားသည်။ ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည် (၁) သဟဇာတဖြစ်သောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု (HSP) တွင်ပိုမိုဆင်းရဲသောရမှတ်များနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ (4) စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အားထက်သန်မှု (OSP); (1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (SEXSAT); (2) ဘဝကျေနပ်မှု (LIFESAT) ။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြproblemနာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟာလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်း (လိင်ဆန္ဒ)၊ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ ဤတိုင်းတာမှုအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးရရှိသောအဖွဲ့သည်ပြleastနာအနည်းဆုံး (အုပ်စုတစ်ခုမှလက်ဝဲသို့) ပြhadနာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
27) ဘာ၏ compulsive အသုံးပြုမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အစိတျရငျးအလှူငွေ (2019) - Cybersex စွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်တူပြီး၊ ကောက်နုတ်ချက်များ
ထိုကဲ့သို့သောကျား, မကွဲပြားမှုအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ယောက်ျား၌) သာသေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ် compulsive ကျဘာအသုံးပြုမှုအတွက် (အမျိုးသမီး) ပင်အဘယ်သူမျှမအခန်းကဏ္ဍ။ ထို့ပြင် CMQ တိုးမြှင့် subscale အဆိုပါ CIUS ရမှတ်အထောက်အကူပြုဖို့မထင်ထားဘူး။ ဒါကဘာစွဲလိင်အားဖြင့်သာယောက်ျားအတွက်သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမောင်းနှင်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Tသူ၏တွေ့ရှိချက်သည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယိုများကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။Voon et al ။ , 2014) နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုအရေအတွက်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်း) သည်မလိုက်နာသောဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်မပတ်သက်ပါ။Laier et al ။ , 2014; Laier, Pekal, & Brand, 2015).
စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုများတွင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း“ liking” အတိုင်းအတာ (hedonic drive) သည်“ လိုသော” (မက်လုံးပေးလွန်းခြင်း) နှင့်“ သင်ယူခြင်း” အတိုင်းအတာများ (ဥပမာကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုများဥပမာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်း) ထက် ပို၍ သေးငယ်သောအခန်းကဏ္ play မှပုံရသည် cybersex အသုံးပြုတဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေး; Berridge, ရော်ဘင်ဆင်, & Aldridge, 2009; ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2008).
ပထမတစ်ချက်မှာ compulsive ကျဘာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ရင်း၏သေးငယ်တဲ့အခနျးကဏ်ဍကိုအပြန်အလှန်အားပုံရသည်။ ဒါဟာဆန္ဒပြည့်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝအပြုအမူ၏အဓိက drive ကိုမပေးကြောင်းပေါ်လာသည်။ ဤသည်လေ့လာရေးအတွက် CIUS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အတိုင်းအတာ, ဒါပေမယ့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကျဘာအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအကဲဖြတ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုမှ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေခြင်း) မှလျော်ကြေးပေးခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားချက်များမှလွတ်မြောက်ရန်ရှာဖွေခြင်း) မှစွဲလမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုအဂတိလိုက်စားသည် လူငယ် & အမှတ်တံဆိပ်, 2017).
28) ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) - နိဂုံးမှ:
ဖော်ပြထားသောကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသုတေသနသည် PH သုတေသန၏နယ်ပယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း (ပြproblemနာရှိသည့်) hypersexual အပြုအမူအပေါ်ရှုထောင့်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနက“ နှုတ်ထွက်ခြင်း” နှင့်“ အန the တရာယ်ကျဆင်းခြင်း” သည်“ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ” အချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် PH ၏အရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းများ (ပြသနာအလွန်ပြင်းထန်ခြင်း) ။ သို့သော်ငြားလည်း, “ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” (အမျိုးသမီးများအတွက်) သို့မဟုတ် covariate (အမျိုးသားများအတွက်) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်“ အော်ဂဇင်အကြိမ်ရေ” သည် PH အားအခြားအခြေအနေများနှင့်ခွဲခြားရန်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းအားကိုပြသခြင်းမရှိပါ. ဤရလဒ်များအရ hypersexuality ပြproblemsနာများအတွက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည်“ ထုတ်ယူခြင်း”၊ “ ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း” နှင့်အခြားလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏“ ဆိုးကျိုးများ” အပေါ်တွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်“ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှု” အပေါ်တွင်သာအာရုံမစိုက်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။60] အဓိကအားဖြင့် hypersexuality ကိုပြproblemနာအဖြစ်ကြုံတွေ့ရသော“ Negative Effects” များကြောင့်ဖြစ်သည်။
29) ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) -
လက်ရှိနမူနာတွင်မြင့်မားသောအော်ဂဇင်အကြိမ်ရေပါ ၀ င်သူများသည် hypersexuality နှင့်ပြofနာများကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေနည်းပါးသည်။37,58] မတည်ရှိနိုင်ပါ။ အလားတူစွာ၊ “ သည်းခံစိတ်” (လိင်ပိုမိုလိုချင်သည်) သည် PH ကိုအကဲဖြတ်ရန်မသုံးနိုင်ပါ။ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် “ Sexual Desire” အချက်သည် PH ၏အနှုတ်လက္ခဏာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။ ဤသုတေသနကပထမနှင့်အဓိကအားဖြင့် hypersexuality သည်ပြproblemနာအဖြစ်ကြုံတွေ့ရခြင်းရှိမရှိဖော်ပြသည့်“ Negative Effects” အချက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆက်ဆံမှုကြိမ်နှုန်းသည် PH ၏အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိသောလူအများစုတွင် PH ၏ကောင်းသောညွှန်းကိန်းများမဟုတ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ပုံမှန်လိင်ဆန္ဒကိုတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းစေသောကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်အပျော်အပါးကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းစေသည့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်တောင့်တကြသည်၊ သို့သော်ယင်းသည်“ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ာင်း"(စွဲ -related တွေကိုမှ hyper- တုံ့ပြန်မှု) ။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုသည်လိင်စိတ်ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း၏သက်သေဖြစ်သည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။
တစ်ခုမှာ "လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူသောအဆိုကိုလေ့လာမှုများကမှားယွင်းစေသည်။"
Pingback: Pornografi TecavüzOranlarınıDüşürebilir Mi? - Neverfap Akademi